Umatshini wokuphosa abenzi kunye nabanikezeli - China iMveliso yoVavanyo lomzi mveliso
Cast ingqiniba aluminiyam
Ngaba i-aluminium emsulwa okanye i-aluminium ingxubevange engot ilungiswe ngokomlinganiso wobume obuqhelekileyo, emva kokufudumeza okungengokwamanzi kwi-aluminium ingxubevange engamanzi okanye imeko etyhidiweyo emva koko ngobunjani bobuchwephesha okanye inkqubo ehambelana nayo ye-aluminium engamanzi okanye i-aluminium etyhidiweyo egalela emqolombeni, emva kokupholisa ukwenza imilo efunekayo yezahlulo zealuminium.
I-aluminium esetyenziswa ekubunjweni kwe-aluminium ibizwa ngokuba: i-aluminium alloy.Iindlela eziqhelekileyo zokuphosa i-aluminium zezi: ukuphosa isanti, ukufa, ukuphosa uxinzelelo oluphantsi, ukulahla ngokuchanekileyo, ukusila komngundo osisigxina njalo njalo.
Umkhono wealuminium flange
Phosa ialuminiyam ngaphezulu
Yilahla izixhobo zentsimbi etsobhileyo
Isinyithi sokuphosa yintsimbi ebandakanya ikakhulu intsimbi, icarbon kunye nesilicon.
Kwezi alloys, umxholo wekhabhoni ugqitha isixa esinokugcinwa kwisisombululo esomeleleyo se-austenite kubushushu be-eutectic.
Isinyithi yentsimbi yintsimbi yentsimbi kunye nekhabhoni enomxholo ongaphezulu kwe-2.11% (ngokubanzi 2.5 ~ 4%) .Yinto eneengxubevange ezininzi zentsimbi, icarbon kunye nesilicon njengezona zinto ziphambili kwaye ziqulathe imanganese, isalfure, i-phosphorus Ngamanye amaxesha ukuze kuphuculwe iipropathi zoomatshini zentsimbi okanye zomzimba, iipropathi zeekhemikhali, kodwa zongeze isixa esithile sezinto zentsimbi, ingxubevange yentsimbi.
Kwasekuqaleni kwenkulungwane yesithandathu ngaphambi kwexesha le-BC, i-China iqalile ukusebenzisa i-cast iron, kunamazwe ase-Europe phantse kwiminyaka engamawaka amabini ngaphambili.
Ngokwendlela yekhabhoni ekhoyo kwisinyithi yentsimbi, intsimbi yentsimbi inokuhlulwa kubini
Isinyithi esiphothiweyo esimhlophe ngaphandle kwento enyibilikayo encinci kwi-ferrite, enye ikhabhoni ngokohlobo lwesamente ikho ngentsimbi, ukuqhekeka kwayo kuyisilivere-emhlophe, ebizwa ngokuba yintsimbi emhlophe. yokwenza intsimbi kunye nokungenanto ukuvelisa intsimbi oluthambileyo oluthambileyo.
2.I-Gray cast iron carbon yonke okanye uninzi lwe-flake graphite ikhona kwisinyithi, i-fracture yayo imnyama ngwevu, ebizwa ngokuba yigrey cast iron.
Icandelo le-carbon ye-hemp cast iron ikhona ngohlobo lwe-graphite, efana ne-grey cast iron. Elinye icala likwimo ye-cementite yasimahla efana ne-iron cast emhlophe. Olu hlobo lwesinyithi luye lube nobunzima obukhulu kunye nobunzima, ngoko kunqabile ukuba lusetyenziswe kwishishini.
Ngokwe-graphite morphology eyahlukeneyo yentsimbi, isinyithi singahlulwa sibe
1.Igraphite nge-grey cast iron yiflake.
2.I grafayithi yentsimbi oluthambileyo oluthambileyo i-flocculent.It ifunyenwe kwinto ethile emhlophe yentsimbi emveni kokufakwa kubushushu obuphezulu ixesha elide.Iipropathi zayo zoomatshini (ngakumbi ubunzima kunye neplastikhi) ziphezulu kune-iron cast cast, ke ibizwa ngokuba intsimbi oluthambileyo oluthambileyo.
I-graphite kwi-iron nodular cast is spherical.It is found by spheroidizing treatment before pouring iron.This kind of iron cast not only has high properties mechanical or iron cast iron and malleable cast iron, but also has a simple process process than ... intsimbi oluthambileyo oluthambileyo. Ngapha koko, iipropathi zayo zoomatshini zinokuphuculwa ngakumbi ngonyango lobushushu, ke iya isetyenziswa ngokubanzi kwimveliso.
Siphose intsimbi isale iqokobhe
Phosa i-iron bopha